Izvo tsika dzenyika dzakanyanya kukanganiswa nedambudziko muTurkey | Ehupfumi Zvemari
Izvo tsika dzenyika dzakanyanya kukanganiswa nedambudziko muTurkey
Iri zhizha ratipa kushamisika kwakashata kwekuti vashoma uye varipakati varimari vanga vasina. Ndezve iyo dambudziko rezvemari muTurkey uye izvo zvakatungamira kumari yenyika, iyo lira, yakadzikira nehumwe huturu mumisika yemari. Kunyangwe ndiani akatambura zvakanyanya kukanganisa Iwo ave ari misika yemasheya mukondinendi yakare, kunyanya iyo yeSpanish nekuda kwekuvapo kwakasimba kwemamwe emakambani ayo akakosha. Nechikonzero ichi, hazvishamise kuti bhenji yekuyera yeSpanish equities, iyo Ibex 35, ndiyo yakanyanya kurohwa mumazuva ano.
Izvo zviri kuitika muTurkey chinhu icho varimi vasina uye izvo zviri kunyatso kuvakonzera kurasikirwa nemari yakawanda. Kunyanya kana nzvimbo dzako dzakafumurwa kune mamwe maitiro pamusika wenyika. Iye zvino zvinoramba zvichionekwa kuti izvi zvehupfumi zvinogara kwemazuva mashoma kana, nekusiyana, zvinogona kuwedzera kwenguva yakareba. Kusvikira iwe uchinge watogona kudzoka kubva kuzororo uye iwe hauna imwe sarudzo kunze kwekuita sarudzo nezve dzimwe mari dzakaitwa mugore rino.
Ehezve, iyo dambudziko rehupfumi muTurkey rakakomba zvakanyanya kupfuura zvarinotaridza kubva pakutanga nekuti rinogona kupedzisira rakanganisa humwe hupfumi pasi rose. Uye pakati peizvi, hongu, pane iyo yeSpanish imwe nekuda kwenzira dzakatarwa pamusoro. Zvino zvichave zvakafanira kuti uone kuti ndedzipi tsika dzakanyanya kutyisidzirwa nezviito izvi mumisika yemari. Nekuti kune akawanda akawanda maitiro ari akafumurwa nedambudziko iri kupfuura iwe pakutanga kufunga. Kusvika padanho rekuti inogona kuve pekutanga kugadzirisa zvigaro mavari kuti vadzivise matambudziko emangwana mukugadzirisa kusevha.
1 Yakabatwa neTurkey: BBVA
2 Mabhangi ese kazhinji
3 Inditex mukutarisa
4 Mapfre nekuvimba kwayo muTurkey
5 Kuchengetedzeka kweEurope kuri panjodzi
6 Chiratidziro cheSpanish SMEs
Yakabatwa neTurkey: BBVA
Hapana mubvunzo kuti boka rezvemari rinotungamirwa naFrancisco González ndiro rakanyanya kukanganiswa nekuchinja kukuru uku mumusika wemasheya. Hazvishamisi kuti chimwe chinhu chiri kusiiwa paradhiso zvinopfuura 5% yemutengo wezvikamu zvavo. Nezve kuburitswa kwayo kwakananga muTurkey, nekuvapo kwemamwe mapoka emari munyika yeOttoman. Nepo dambudziko rakakosha rehupfumi richiripo, hakuzovi neimwe mhinduro kunze kwekuve kure nekuchengetedzeka kwebhangi iri uye kunyangwe mhinduro iri nani. Pakati pezvimwe zvikonzero, nekuti unogona kurasikirwa nemari yakawanda kubva ikozvino. Hazvishamise kuti kuburitswa kweBBVA kuTurkey ndiko kumwe kwakakwirira kwazvo muEuropean banking.
Pane kudaro, kana iwe usina nzvimbo dzakavhurika pane iyi kukosha, zvingave zviri nani kuenderera sepakutanga. Ichave ndiyo nzira yakanakisa yeku chengetedza mari yako pamusoro pazvose. Uye zvakare, iwe unenge watove nenguva yekuita mashandiro uye pamwe nemutengo wakaderera zvakanyanya pane zvavari kutora izvozvi. Chero zvazvingaitika, haufanire kuita nemanzwiro ako, kana zvisiri zvinopesana nekuchenjerera kukuru uye uchifunga kuti mushure mezvose uri kuisa mari yako panjodzi. Iri bhangi riri rekutanga revaya vanowedzeredzwa nedambudziko remari neupfumi iri risingatarisirwe. Kupfuura zvinogona kuitika mumasvondo mashoma anotevera kana kunyangwe mwedzi.
Mabhangi ese kazhinji
Mumwe wevakakundwa mudambudziko iri rakakosha chikamu chebhengi chizere. Iwe haugone kukanganwa mupfungwa iyi kuti yaive iyo chidimbu chakarasikirwa nemari yakawanda mumazuva ano ekutengesa kumanikidza mumisika yemari. Zvese zviri zviviri maererano nemabhangi eSpanish, pamwe neEuropean. Kunyangwe pasina kuburitswa kwakananga kwakadai senge mune chaicho chiitiko cheBBVA. Zvisinei nezvose, iwe unofanirwa kudzivirira kumira kwayo pamusoro pechero zano rekudyara iwe rauri kutora kubva muzhizha rino rave kuda kupera.
Nechikonzero ichi zvakakosha kuti iwe usaburitse nzvimbo dzako kune chero boka remari. Kwete chete kubva kunyika yedu, asiwo kubva kune ese pamusoro peiyo Kondinendi yeEurope. Nechinangwa chekudzivirira matambudziko nekuda kwezvingaitika muTurkey kubva zvino zvichienda mberi. Hapana chinhu chiri nani pane kuve unodzivirira kuchengetedza yako zviwanikwa mune ekudyara. Chero zvazvingaitika, ichave iri yakanakisa zano rekunzvenga kuenda panguva yakaipa maererano nenyika yemari. Nekuti chikamu chebhengi ndechimwe chematunhu akashupika nekuda kwezvingaitika munzvimbo ino.
Mumwe akarasikirwa zvikuru ikambani yemachira yeGalician. Hazvishamise kuti kuratidzwa kwake kurudzi rweOttoman kwave kuri kuwedzera. Uye neiyi pfungwa, maakaundi avo ebhizinesi anogona kuramba pamusoro pezvinozoitika kumari yavo, ne Turkish Lira. Ehezve, inogona kuve kurova kwakakomba kune ako bhizinesi zvido uye kunyange kuratidzwa mukuderera mukukosha kwemasheya ako. Kunze kwemaitiro ake enguva dzose ayo achiri akanaka kwazvo kune vanoita mari. Asi mazuva ano rakadonha muzvinzvimbo zvaro, pamwe nekukosheswa kwepasi pe3% zvine chekuita nemitengo yepakutanga kusati kwatanga chikamu chemusika wemusika uno.
Iwe haugone kukanganwa kuti Inditex yaive muchinzvimbo chekudzoreredza iyo yekumusoro maitiro iyo iyo yakanga ichangobva kurasikirwa. Chinhu chakakanganisa aya maonero emisika yemari pane iyi yakakosha kukosha kwenzvimbo dzenyika. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kuyeukwa kuti kambani yemachira ine kusvibiswa kwakasimba MuTurkey, iri zvakare yakakosha kukosha kumakambani makuru maviri ekugadzira machira eSpanish, imwe yacho iri rinozivikanwa Mango. Huye, makambani ese ari maviri akaisa Turkey semusika wakakurumbira mukati memhando yavo yekugadzira. Panyaya yekambani yeGalician, pamwe neSpain, Morocco nePortugal, inoverengera inopfuura hafu yekugadzirwa kwayo.
Mapfre nekuvimba kwayo muTurkey
Nezve iyo Spain inishuwarenzi kambani, yanga iri imwe yehunhu hwakaisa tariro huru munyika mu2014. Muchokwadi, vaitarisira kupeta chikamu chavo chemusika ipapo kubva mashanu kusvika 10% kana 15%, kunyangwe pasina kukwanisa kuzviita uye kunyangwe kunongedza pasi madonhwe ebatsiro muna 2017 muTurkey. Panguva ino, idzi fungidziro dzakadonha uye zvakatungamira kuti kutengeswa kuve kwakaiswa pachena pakutenga. Nezve avo varimari vavari kuona kuti mitengo yavo iri kuona sei kukosha kwavo kuri kudzikira mukati meaya akakosha zhizha.
Kune rimwe divi, mamwe emabhizimusi emari akakosha ane zvido zvakanyanya munyika yeOttoman ari Caixabank naBanco Sabadell, kunyangwe isiri iyo chete bhangi ine zvikamu mukati memakambani eIbex 35, sezvatiri kuratidza muchinyorwa chino. Naizvozvo, iwe unofanirwa kuve wakangwarira kwazvo mukuratidzwa kwako kumakambani aya atiri kupa mazita. Nenjodzi yakakwira kwazvo mune chero mhando yekushanda, uko vashoma uye vepakati varimi vane zvakawanda zvekurasikirwa pane kuita mari. Ndiwo mamiriro ezvinhu avanopa semhedzisiro yedambudziko remari nehupfumi muTurkey.
Kuchengetedzeka kweEurope kuri panjodzi
Haisi chete maquity anoratidzwa neTurkey-centric njodzi. Semuenzaniso, mapoka emari aripo munyika dzenyika yekare. Mupfungwa iyi, zvakakodzera kutaura masisitimendi ezvekukosha kwakakosha kwe Unicredit uye BNP Paribas. Hazvishamise kuti kwave kune mamwe makambani akarangwa nemastock exchange mukati memazuva ano akashamisa chikamu chakanaka chevashambadzi vadiki nepakati. Chero zvazvingava, kwave kusiri kwekunyepedzera kwekuti masheya emasheya akadonha zvine simba uye achipokana neyakagadziriswa kusvika ipapo. Kupfuura zvinogona kuitika kubva kumavhiki anotevera uye izvo zvinogona kutowedzera.
Kunze kwezviri kuitika nezvikamu zvebhanga reSpanish BBVA, iro rakanyorwa sekambani yakanyanya kutapurwa yeSpain, Turkey yakagadzirirwa kuti ive imwe yenzvimbo huru kwazvo dzekunze kwenyika dzeSpanish kunze kweEuropean Union. Ichi ndicho chimwe chezvinhu zvinoshungurudza zvinogona kuve nemhedzisiro, mune ino kesi, pane hupfumi hwenyika. Kunze kwezvinoitika pamwe nekuchengetedzeka kwakanyorwa mumakesi makuru emusika wemasheya enyika yedu.
Chiratidziro cheSpanish SMEs
Mupfungwa iyi, uye zvinoenderana neazvino dhata yakapihwa neICEX, zvinotumirwa kunze kwenyika kuTurkey muna 2017 zvakasvika 5.700 mamiriyoni emamiriyoni. Izvi zvinomiririra kukura kweanopfuura gumi% zvichienzaniswa negore rapfuura uye mune chero mamiriro ezvinhu neepamusoro nhanho yakambosvitswa mukirasi ino yekushanda nekutengeserana kwekutengesa. Uye zvakare, kumakambani ese madiki uye epakati-akasarudzika ayo akaoneswa nenjodzi dzekudzikira kwemari yenyika yeTurkey.
Pakati peavo vakatanhamara pane vanogadzira mota muSpain, sezvo iri yechishanu mutengi wemotokari dzeSpanish pasi rese uye wekutanga kunze kweEU. Kunyangwe pasina chimwe chazvo chakanyorwa pamisika yemari.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Izvo tsika dzenyika dzakanyanya kukanganiswa nedambudziko muTurkey
Inishuwarenzi yekugamuchira mari yekubhadhara
Iwe unofanira kuisa mari riini pamusika wemari?